‘गर वा मर’को अवस्थामा सोमपालको धनगढी ! | Hamro Khelkud
‘गर वा मर’को अवस्थामा सोमपालको धनगढी !
धनगढी (हाम्रो खेलकुद)– तेस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) को तेस्रो दिन आज दुई खेल हुने छन् ।
पहिलो खेलमा महेन्द्रनगर युनाइटेड र काठमाडौं गोल्डेन्सबीच हुने छ । खेल ९ बजेपछि सुरु हुने छ । काठमाडौंले पहिलो खेलमा धनगढी स्टार्सलाई ४ विकेटले पराजित गरेको थियो । काठमाडौं लगतार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रिने छ । यता पहिलो खेलमा रुपन्देहीसँग २ रनले पराजित भएको शरद भेषवाकर कप्तान रहेको महेन्द्रनगर पहिलो जितको खोजिमा छ । गत वर्ष काठमाडौंले महेन्द्रनगरलाई ५ विकेटले हराएको थियो ।
त्यस्तै आजको दोस्रो खेलमा धनगढी स्टार्स र विराटनगर किंग्स भिड्ने छन् । खेल १ बजेपछि सुरु हुने छ । दुबै टोली पहिलो जितको खोजिमा हुने छन् । पहिलो खेलमा काठमाडौंसँग ४ विकेटले र दोस्रो खेलमा अत्तरियासँग ५ रनले पराजित भएको धनगढी गर वा मरको अवस्थामा छ । सुरुवाती दुई सिजन उपाधि जितेको धनगढी प्रतियोगिताको प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना जिवित राख्न जित्नैपर्ने दवाव छ ।
अघिल्लो चरणको यात्रा कायमै राख्न धनगढीले आजको खेल जित्नै पर्ने हुन्छ । अन्यथा धनगढीको अघिल्लो चरणको यात्रा कठिन हुने छ । त्यस्तै पहिलो खेलमा विराटनगर रुपन्देहीसँग ५ विकेटले पराजित भएको थियो । करण केसी कप्तान रहेको विराटनगर आजको खेलमा जित निकाल्दै अघिल्लो चरणको यात्रा बलियो बनाउने सोचका साथ मैदान प्रवेश गर्ने छ । गतवर्ष धनगढी विराटनगरसँग १८ रनले पराजित भएको थियो ।